Tolotra Fandikan-teny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Tolotra Fandikan-teny Global Voices
Afaka mitantana ny tetikasam-pandikateninao izahay, na tokana na maro, mila fiteny maro ary asa mila voadika haingana
Voadika ny 26 Jolay 2019 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, українська, Français, Italiano, English
Manome tolotra fandikan-teny mifandraika amin'ny iraka atao ho an'ireo mpiara-miasa sy ny fikambanana mitovy hevitra aminy ny Global Voices.
Ny tolotra omenay
Afaka mitantana ny tetikasanao momba ny fandikan-teny izahay, Hatramin'ny komandy tokana ka hatramin'ny asa maro karazana sy amin'ny fiteny maro izay mitaky fanomezana haingana ny asa nadika. Manaja fatratra ny iraka ataonay ny ekipanay mpahay teknolojia sy ireo mpandikateny mahalala kolontsaina ary afaka mamokatra fandikan-teny manokana amin'ny lohahevitra maro isan-karazany. Miara-miasa aminay ao amin'ny Lingua, izay mandika ny lahatsoratra Global Voices amin'ny fiteny maherin'ny 40 ny ankamaroan'ny mpandika teninay.
Fandikan-teny mahomby, marina ary ao an-toerana
Mifantoka amin'ny foto-kevitra “varotra ara-drariny” amin'ny famolavolana ny fifanarahanay izahay. Manome karama ho an'ny mpandika teninay amin'ny sarany sahaza izahay ary mampihena araka izay azo atao ny fandaniana amin'ny fitantanana. Mifantoka amin'ny sehatra mila fandikan-teny manokana mifandraika amin'ny iraka fototra ataon'ny Global Voices izahay.
Ny sehatra tena angadinay
Media sy ny asam-baovao
Fahalalahana maneho hevitra sy aterineto misokatra
Fampandrosoana ny media,
Fiarovana sy fanohanana ny teknolojia misokatra
Fiarovana ny fiteny indizeny sy atahorana ho faty
Fanabeazana sy fikarohana ary sehatra mifandraika aminy.
Ankoatra ny fanampiana anao amin'ny fanomezana fandikan-teny mahafa-po ho an'ny fikambanana misy anao, manampy ny fiarahamonin'ny mpandika teninay hiroborobo ny fanomezana tolotra fandikan-teny ho anao, manome azy ireo hirika hiasana sy handray anjara amin'ny fampahalalana miangona eo amin'ny sehatray amin'ny fiteny samihafa.
Mpanjifa sy ny mpiaramiasa
Ireo mpanjifa sy mpiara-miasa aminay amin'izao fotoana izao dia: WITNESS, Media Legal Defence Initiative, ny Web We Want, Web Foundation, Refugees United, MIT Media Lab, ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety ary ny International Press Institute. Nandika ny zava-drehetra miainga amin'ny dikan-tsoratra ho an'ny lahatsary momba ny zon'olombelona, hatramin'ny hetsika fiarovana, ary ny fitaovana ara-pitsarana manohana ny fiarovana ny mpanao gazety sy ireo mpikatroka eo ambany fandrahonana izahay.
Midadasika sy samihafa ny vondrom-piarahamoninay, ka afaka manampy anao amin'ireo fiteny lehibe sy ireo fiteny tsy dia fantatra izahay. anisan'izany fa tsy voafetra amin'ireo ihany… ny teny Arabo, Catalan, Sinoa, Holandey, Anglisy, Frantsay, Alemà, Grika, Hongroa, Italiana, Japoney, Makedoniana, Pôrtiogey, Rosiana, Espaniôla, Swahili, Tiorka, Ordò, ary ireo tenim-paritra mifandraika amin'izany.
Ampiasao ny endrika etsy ambany raha hifandray amin'ny Mpitantana ny Tetikasa Fandikan-teninay, Marianna Breytman sy mila fanazavana fanampiny na hilaza momba ny tetikasanao. Aza misalasala manontany momba ireo fiteny izay tsy voalaza etsy ambony, fa hiezaka mafy izahay hanampy anao amin'ny filàna fandikan-teny, na inona na inona izany!
Afrika Mainty 4 ora izay
Azia Afovoany sy Kaokazy 4 ora izay
Fantaro i El Hadji Ibrahima DIAGO, mpikatroka ho an'ny fiteny Wolof
Antsafa 16 ora izay